Biyo-qaybiyeyaasha → Iskuul • Jaamacad • Xannaanada • Warsaw
Ma u baahan tahay biyo-wadeenka dugsiga, xanaanada ama jaamacadda? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee bangiyada, oo aan annagu u nahay qaybinta gaarka ah ee Poland.
Dhawaan, tayo biyo biyo gelinta Poland ayaa soo wanaagsanaaneysa. Sharciga Polish iyo qawaaniinta EU-da waxay u baahan yihiin dayactirka heerarka biyaha sarreeya. Si kasta oo ay jiraan wax shaki ah, waxaa suurtagal in la dalbado tijaabo ah tayada biyaha ka soo baxayo qasabadeena xarunta ugu dhow nadaafadda iyo cudurka faafa.
Dad aad u tiro badan ayaa sidoo kale muujinaya wacyigelinta caafimaadka, taas oo micnaheedu yahay inaan aad uga taxaddarno waxaan cabno. Dhirta daaweynta biyaha waxaa lagu rakibay guryo badan, ama miirayaasha iyo Bixiyeyaasha biyaha.
Laga bilaabo Sebtember 1, 2015, iskuulada oo dhami way mamnuuceen iibinta cuntada aan caafimaadka qabin oo ay ku jiraan cabitaannada macaan. Si kastaba ha noqotee, dugsiyadu waxay leeyihiin waajibaad ah inay ardayda siiyaan biyo la cabbo, taas oo ah cabitaanka ugufiican ee aadanaha.
Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in la hubiyo, guriga oo keliya, laakiin sidoo kale bannaanka, in carruurta iyo dhallinta aan qaan gaarin ay si fudud ugu helaan biyo tayo leh oo habboon: caafimaad leh, nadiif ah oo dhadhan leh.
Waxaa la rumeysan yahay in carruurta dhigata xanaanada, ardayda iskuulka iyo ardayda jaamacadaha ay tahay inay si joogto ah u helaan biyo la cabo goobta wax lagu baranayo, halkaas oo ay ku qaataan saacado badan maalintii. Sida ugu habboon, biyahan waa inay ahaadaan kuwo bilaash ah oo si fudud loo heli karo. Shirkadaha soo saara biyo-cabitaannada biyaha cabba waxay ka soo baxaan damacyadan. Aaladaha noocan oo kale ah ayaa si ku habboon loogu meelayn karaa iskuul kasta. Caruurta iyo dhallinta aan qaan gaarin way isticmaali karaan markasta oo baahi timaado, taasi waa, inta lagu gudajiro fasaxa fasalka ama casharada waxbarashada jirdhiska kadib. Helitaan joogto ah oo aan xadidneyn oo nadiif ah, biyo cusub oo dhadhan fiican leh ayaa kuu fududeyn doona hawo habboon jirka, waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad barato caadooyinka cunidda habboon.
Biyo la cabbo, ilo-biyo iyo dhammaan noocyada cabbayaasha, ee lagu meelayn karo xarumaha waxbarashada ee ku habboon meelaha ugu habboon, ayaa fududeysa in ardayda la siiyo biyo wanaagsan oo macaan.
Bixiyeyaasha biyaha la cabo waa in lagu meeleeyaa meel si sahlan loo gaari karo: fasalka gudihiisa, marinka, qolka dugsiga ama qolka dharka ku xiga ee jimicsiga, kaas oo hubin doona helitaanka fudud ee biyaha tayo sare leh. Aaladaha loogu talagalay iskuulada ayaa leh ilaalin gaar ah oo looga hortago in biyuhu ku daadiyaan caruurtu.
Iyada oo la tixgalinayo in isha ugu weyn ee dareeraha ilmaha ay tahay inuu ahaado biyo tayo wanaagsan leh, kuwa biya-cabbayaasha biyo-cabidda ah ayaa fuliya mala awaalkaas.
Bixiye casri ah wuxuu hubiyaa in biyo nadiif ah la heli karo si fudud, iyadoo la dhimayo kharashaadka ku baxa helitaanka biyo la cabbo ee ardayda. Faa'iido dheeraad ah ayaa sidoo kale ah daryeelka deegaanka.
Biyaha ka imanaya miisaska kuyaala xanaanada, iskuulka ama jaamacada waxay leeyihiin dhadhan iyo tayo u gaar ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku hogaamiso qaab nololeed caafimaad leh ood qaabeeyso caado biyo cabitaan iyo cunista caafimaad qabta dhalinyarada.
Maaddaama ay carruurtu tahay inay cabbaan qiyaastii laba litir oo biyo ah maalintii, xalka ugu fiican tan ayaa ah in lagu rakibo biyo-cabbiyeyaasha xarun walba oo waxbarasho, meelo dhowr ah, si biyuhu ay u heli karaan dhammaan ardayda.
biyo bilaash ah dugsigabiyo bilaash ah dugsigamarin biyoodka dugsigaBixiyeyaasha biyaha ee carruurtaBixiyeyaasha biyaha dugsigawaxbarashadaisha biyaha ee dugsigakhamriga ku cabba dugsiyadabiyo cabbayaasha iskuuladabiyo loogu talagalay carruurta dhigata dugsiyadabiyaha jaamacaddabiyaha dugsigabiyaha tubada iskuulkaBiyo kululaynta iskuuladaguga biyaha dugsiga